Guardiola oo sheegay waxa uu u baahan yahay Aguero kaddib dib ugu soo laabashadiisa garoomada – Gool FM
(Manchester) 01 Maarso 2021. Tababaraha Manchester City ee Pep Guardiola ayaa sheegay in weeraryahan Sergio Aguero uu u baahan yahay waqti si uu dib ugu helo qaab ciyaareedkiisii ​​fiicnaa kaddib muddo dheer uu maqnaa, ciyaaryahanka reer Argentina ayaa laga doonayaa inuu u dagaalamo booskiisa kooxda.
Aguero waxaa soo gaaray dhaawacyo isdaba joog ah, waxaana sidoo kale haleelay caabuqa saf mareenka ah ee Korona Fayras, taasoo ka dhigtay inuu dib uga dhoco ka qeyb galkiisa 11 kulan tartamada oo dhan ah xilli ciyaareedkan.
32 jirkaan weerarka ka ciyaara ayaa soo galay safka koowaadee kooxda Man City markii ugu horeysay muddo afar bilood ah inta lagu jiray guushii 2-1 aheyd ay ka gaareen West Ham United, iyadoo sidoo kale City ay gaartay guusheedii 20-aad xiriir ah tartamada oo dhan.
Guardiola ayaa sheegay in Sergio Aguero, oo ah ciyaaryahanka abid ugu goolasha badan kooxda Man City isagoo dhaliyay 256 gool, uu weli yahay xubin muhiim ka ah kooxda.
Macalinka reer Spain ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Waxa ugu fiican ayaa ah kan ciyaarayo, ma ahan Sergio, ee waa wax ku saabsan qof walba, waxaan isku dayaa inaan sameeyo go’aano cadaalad ah.”
“Sergio Aguero aad ayuu muhiim noogu yahay wuxuuna leeyahay tayo aan caadi aheyn, waxaa jiri doona kulamo adag oo is xigxiga, waxaana ubaahan nahay gool, yaa noqon doona ciyaaryahanka saxda ah ee ku haboon xaalladahan, isagu wuxuu soo laabtay kadib hal sano wuxuuna ubaahan yahay waqti.”
Si kastaba ha ahaatee, Man City ayaa ku hoggaamineysa horyaalka 62 dhibcood 26 kulan oo ay ciyaartay, waxayna 12 dhibcood ka sareysaa kooxda ay xafiiltamaan ee Manchester United, oo ku jirta kaalinta labaad.